‘सूचना प्रविधिमा स्पष्ट नीतिको खाँचो’ - Nepalgunj Business
‘सूचना प्रविधिमा स्पष्ट नीतिको खाँचो’
सूचना प्रविधिको उपयोगिता बिना हुने विकासको के अर्थ ? जहाँ पनि जसरी पनि सूचना प्रविधिले सबैलाई छोएको छ । त्यसैले गत वर्ष भएको निर्वाचनमा हाम्रा नेताहरुले सूचना प्रविधिलाई नै मुख्य नारा बनाए । उनीहरुले स्मार्ट सिटीदेखि भिलेज बनाउनेसम्मका लोकपृय नारा अघि सारे । त्यो कार्यान्वयन कहिले हुन्छ ? हेर्न बाँकी नै छ । कार्यान्वयन गर्ने र गराउने दायित्व हामी सबैको हो । यसै सन्र्दभमा क्यान महासंघ बाँके शाखाका पूर्व तथा बर्तमान पदाधिकारीसंग सूचना प्रविधि र क्यान महासंघका बिषयमा गरिएको संवाद यसपटक प्रकाशन गर्ने जमर्को गरेका छौं ।
पूर्व उपाध्यक्ष, क्यान महासंघ
स्थानीय तह गठन भएसंगै शहरदेखि गाउँसम्म विकासका मुद्दामा आशाको सञ्चार पलाएको छ । ती धेरै विकासका मुद्दा मध्ये एक हो, सूचना प्रविधि । जो अहिलेको समयका लागि नभई नहुने पक्ष बन्न पुगेको छ । सूचना प्रविधि बिना हरेक विकासका काम असम्भव छ भन्दा फरक पर्दैन । धिमो गतिमा भए पनि नेपालमा यसको विकास भईरहेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनले सिंहदरवार केन्द्रित राज्य गाउँमुखी बनिरहेको बेला सूचना प्रविधिका बिषयमा बिभिन्न चर्चा, परिचर्चा चल्न थालेका छन् । आमनागरिकदेखि नेतासम्मले ‘डिजिटल’, ‘स्मार्ट’ नेपाल निर्माणको बिषयमा बोल्न थालेका छन् । ढिलै भए पनि सूचना प्रविधिको विकासका मुद्दामा हुन थालेका चर्चा परिचर्चाले राम्रै संकेत गरेको छ ।
राज्यको बिकेन्द्रीकरण संगै यतिबेला सूचना प्रविधिका गतिबिधिको क्षेत्र पनि बिकेन्द्रीकरण भएको छ । यो उत्साहजनक कुरा हो । सूचना प्रविधिको विकास हुन्छ भन्ने बिश्वास जाग्न थालेको छ । यो सुरुवात हो भन्ने लाग्छ मलाई । तर गर्न बाँकी कुरा धेरै छन् । हाम्रो माझ थुप्रै चुनौती र अवसर छन् । चुनौतीहरु पर गर्दै अवसरलाई छोप्न सक्यौं भने ‘डिजिटल’ नेपाल निर्माणको सपना बिपनामा परिणत हुन धेरै समय लाग्दैन ।
निर्वाचनताका नेताहरुले डिजिटल र स्मार्ट नेपाल बनाउने उद्घोष गरे । त्यसबेला जनताले स्मार्ट नेपाल बनाउने नेताको उद्घोषलाई कति बुझे बुझेनन्, समिक्षाको बिषय थियो । तर स्मार्ट नेपाल भन्ने कुरा जोकोहीका लागि लोकपृय नारा भने बन्न पुग्यो । त्यही नाराले सबैको ध्यान खिच्यो । दलहरुले स्मार्ट भिलेज, स्मार्ट सिटी जस्ता नारा दिएर मत प्राप्त गरे । तर अब त्यो स्मार्ट सिटी र स्मार्ट भिलेज कसरी बनाउँछन् भन्ने कुरा सबैका लागि चासोको बिषय बनाएको छ । नेपालगन्जको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा अग्रणि पोख्रेललाई पनि स्मार्ट सिटी, स्मार्ट भिलेज बनाउने नेताहरुको चुनावी नाराले ध्यान नखिचेको होइन । तर आफुले गरेको कामको अनुभवको आधारमा उनलाई त्यो चुनावी नारा सस्तो लोकपृयता भन्दा फरक थिएन । आफ्नो गाउँ, शहर स्मार्ट बन्ने कुरा कस्लाई मन पर्दैन र ? तर त्यो स्मार्ट त्यसै बनिदैन । स्मार्ट शहर र गाउँ बनाउन हामीले धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । अहिल्यै सस्तो लोकपृयता कमाउने काम कसैले नगरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर नारा लागिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तर्फ हाम्रो ध्यान हुन जरुरी छ ।
यस क्षेत्रमा सूचना संचार तथा प्रविधिलाई शहरदेखि गाउँसम्म पु¥याई यस क्षेत्रका जनतालाई सूचना तथा प्रविधिमा जोडेर गाउँ तथा शहरको विकासमा टेवा पु¥याउनु रहेको छ । यसै क्रममा यस संस्थाको सक्रियतामा बाँकेको राप्तीपारी सिद्धेश्वर उ.मा.वि.मा. ई–भिलेज स्थापना गरेको छ । उक्त ई–भिलेजबाट त्यस क्षेत्रका जनता लाभान्वित भएका छन् । आजभोलि यस क्षेत्रमा विद्युतिय कारोबार गर्ने कम्प्युटर व्यवसायी, कम्प्युटर इन्स्टीच्यूट, मोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संगठनको रुपमा रहिआएको छ । कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ–बाँके शाखाले नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा व्यवसायी प्रविधि मैत्री बनाउदै यसको प्रयोगमा व्यापकता बढाउने अभिप्रायले क्यान इन्फोटेक २०६८, २०७० सम्पन्न गरेको थियो । व्यवसायीहरुलाई सूचना प्रविधिको प्रयोग सगै प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग गर्ने विषयमा विभिन्न किसिमका प्रविधि सेमिनार गरी विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
क्यान महासंघ बाँके
सूचना प्रविधिसंग मेरो नाता १५ वर्ष अघिदेखिको । यो क्षेत्रमा यतिका समय बिताउँदा अहिले लाग्न थालेको छ, सूचना प्रविधिले यसरी फड्को मारिरहेको छ की कसैले पत्तो नै पाउन सकेका छैनन् । हरेक दिन सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ घटनाक्रम भईरहेका छन् । कतिलाई त यसको भ्येउ समेत हुँदैन । यसको भुक्तभोगी स्वयं हुँ । क्यान महासंघ बाँकेका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेको अवस्थामा मैले बिगत र अहिले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा आएको परिवर्तनका बिषयमा कुराकानी गर्नैैपर्छ ।
नेपालगन्जमा इन्टरनेट भित्रा्उने काम गरेका थियौ । पिसिओ सन्चालन गर्ने क्रममा े १५ वर्ष अगाडी मर्केनटायलबाट मेडियम सिस्टमको डायल अप इन्टरनेट सेवा सुरु गरेका थियौ । इन्टरनेट भनेकै के हो भन्ने धेरैलाई परेका बेला ल्याएको इन्टरनेट सुविधा आम नागरिकले कमै प्रयोग गर्थे । त्यसका प्रयोग गर्दा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय हुन्थे । धेरै पैसा पर्ने भएका कारण सबैको पहुंचमा थिएन, यो । त्यसबेला इन्टरनेटबाट कुराकानी गर्नेको संख्या सम्झना अहिले अचम्ममा पर्छु । इन्टरनेटको पहुँच नभएका कारण त्यस्तो भिड लाग्थ्यो । तर अहिले हातहातमा त्यसको पहुच पुगेको छ । डायलप देखि फाईबर इन्टरनेटको जमानामा आईपुग्दा सन्चारक्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आईसकेको छ । अझै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अनेकौ परिवर्तन भईरहेका छन् ।
साविको मध्य र सुदरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ब्यापारिक हब बाँके जिल्लामा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसंगै सूचना र प्रविधिको विकासमा फड्को मारेको छ । नेपाल सरकारले जिल्लाका आठवटा स्थानीय तहमा आईटी अफिसर नियुक्त गरेको छ । सुखी र सम्बृद्धि नेपालको परिकल्पनाका लागि होस्, स्मार्टपालिका बनाउन आईटि अफिसरको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ । बाँके जिल्लाका सबैपालिकामा इन्टरनेट पुगेको छ । बिकट गाउँ गाउँमा बिस्तारको क्रममा छ । आफ्ना सेवा सुविधा बारे वयभसाईड निर्माण गरिरहेका छन् । यसको अर्थ घरमा बसेर आफ्नो पालिकाको सबै बिबरण हेर्न सकिन्छ । केही स्थानीय तहले आफ्ना मातहतका बिद्यालयमा स्मार्ट बोर्डबाट पढाईरहेका छन् । ई हाजिरीबाट गराईरहेका छन् । यो स्मार्ट शिक्षा पछिल्लो उदाहरण पनि हो । पछिल्लो समयमा बाँकेमा धेरै आईटि कम्पनी सन्चालनमा आएका छन् । सफ्टवेयर डेभलेप गर्ने, वयभसाईड बनाउने, मोवाईल एप्स निर्माण गर्न जिल्ला बाहिर धाउनुपर्ने अवस्था छैन । हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर सप्लाई गर्ने बिज्ञहरु यही सेवा दिन तयार छन् । आईटि व्यक्ती उत्पादन गर्ने यही धेरै कलेजहरु सन्चालनमा आएका छन् । नीजिक्षेत्रसंग आवद्ध संघसंस्था तथा कम्पनीसंग स्पष्ट नीति बनाएर सूचना प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यसक्षेत्रका स्थानीय तहले पक्कै सुःखी र सम्बृद्धिको उत्कृष्ट स्मार्ट बाँके जिल्ला बनाउन सकिन्छ ।
सुर्य प्रकाश श्रेष्ठ
सूचना प्रविधि अन्तर्गत पर्ने कम्प्यूटर शिक्षा एक अपरिहार्य शिक्षा भैसकेको छ जस बिना द्रुत गतिको विकास असम्भवप्रायः छ । आजको युगमा सबैले यस प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् तर वास्तविकता भने अधिकांशलाई थाहा हुन सकेको छैन । कम्प्यूटर भन्ना साथ धेरैले कार्यालय वा घरमा प्रयोग हुने डेस्कटप वा ल्यापटपलाई बुझ्ने गरेका छन् । तर कम्प्यूटरलाई धेरै रुपमा हेर्न सकिन्छ र यसको प्रयोग व्यापक छ । हामीहरुले प्रयोग गर्ने मोबाईल, क्यालकुलेटर आदि पनि कम्प्यूटरको रुप हो जसले हाम्रो जिवनलाई सहज बनाई रहेका छन् । अधिकांशले प्रयोग गर्ने मोबाइल त यसको मामिलामा धेरै अगाडि छ । तर, यसको प्रयोग जुन प्रयोजनको लागि हुनु पर्ने हो त्यो
भैरहेको छैन ।
मानवको भौतिक आवश्यकता गा“स, बास र कपास संगसंगै दौडिरहेको कम्प्यूटर शिक्षा हरेक मानिसको लागि अपरिहार्य छ । यसको लागि सबै पक्षले जोड दिनु जरुरी भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा जति हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । कम्प्यूटर शिक्षा दिने सरकारी तथा व्यक्तिगत फर्महरु धेरै छन् र आ–आफ्नो तर्फबाट शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । कुनै पनि शिक्षा दिने कार्य आफैमा महान कार्य हो तर यसमा वास्तविक शिक्षा दिनु भन्दा पनि कम्प्यूटर शिक्षामा धेरै व्यावसायिकीकरण भैरहेको छ । कम्प्यूटर शिक्षालाई मात्र सैद्धान्तिक शिक्षामा मात्र सिमित पार्नुले कम्प्यूटरमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकिरहेको छैन ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, मंसिर ३, २०७५ 3:54:05 PM